ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေရာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေရာ
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 9, 2011 in Copy/Paste | 17 comments
ကျွန်မ ဒီ Site လေး ရဲ့ ပင်တိုင် စာဖတ်သူပါ။ ရသမျိုးစုံ အတွေးမျိုးစုံ နဲ့ ရေးထားကြတာ တွေကို သဘောလဲကျ၊ အဲလို ရေးတဲ့ သူတွေကို လဲ အားကျပါတယ်။ ကျွန်မ လဲ ကိုယ်အတွေးလေး တွေ ကို Share လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အချိန်ကို ကောင်းကောင်း Manage မလုပ်နိုင်သူ မို့ စိတ်ကူး က စိတ်ကူး နဲ့ ဘဲ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မဖြစ်လာပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အတော်လေး ပေါက်ကွဲ ရင်တောင် မှ Comment လိုမျိုး တွေ လောက်ဘဲ ရေးထွက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ထဲမှာ အခုတစ်လော တွေးနေတာလေးကို ကြိုးစားပြီး ချရေးပါတယ်။ ဒါတောင် ၅ရက်လောက် ကြာခဲ့ပါတယ်။ :-)
ဒီလို မျိုး ရေးလို့ ရအောင် ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ Site ပိုင်ရှင်သူကြီး Kai ကို အထူး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဟာ သာမာန် လူပြိန်း ပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ချစ်သူ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်း နဲ့ ပြည်ပမှာနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ ကြံ့ဖွံ့ အဖွဲ့ဝင် လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ပ မှာနေပြီး နိုင်ငံရေး အကြောင်း စဉ်းစား နေတာကြောင့် ကျွန်မ ကို နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်သုံး ပြီး နေတာလို့ လဲ မထင်ကြပါနဲ့။ ပြည်ပ က မည်သည့် နိုင်ငံရေးသမား နဲ့မှ အဆက် အသွယ် ပြု သိကျွမ်းခြင်း မရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည် စစ်အစိုးရ ရဲ့ သူလျှို လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှ စီးပွါးရေးသမား တစ်ဦး တစ်ယောက် ရဲ့ အမျိုးအဆွေ တော်သူ လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်ကျွမ်း တဲ့ ပညာ နဲ့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ် နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမှ မရှင်းထားရင် အမျိုးမျိုး ထင်ကြတာမို့ပါ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အရှုပ်အထွေးမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ ပွဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မ လို လူတွေ အများကြီးပါ။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မ တွေးကြည့် ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ /သား (ပြည်တွင်း-ပြည်ပ) များစွာ ထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကြောင်း ငြင်းခုံနေသူ တွေ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်း ဘဲ ရှိပါမယ်။ အများစု က တော့ ဘာမှမပြောဘဲ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ လူမှုရေး ပံ့ပိုးမှုလေး တွေကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်း-ပြည်ပ မှာ ရတဲ့ ကိုယ့်ချွေးနဲစာ လေးတွေ ကို ကိုယ့်ပြည်တွင်းက စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အိုမင်းမစွမ်း ရှိသူတွေ အတွက် မျှနေတာလဲ အဲဒီ ငြိမ်နေကြတဲ့ လူအများစု ပါဘဲ။ တိုင်းပြည်မှာ သဘာဝဘေး နဲ့ အရေးကြုံ ရင်လဲ ဝိုင်းဝန်းကြတာ အဲဒီ အများစုပါဘဲ။
ဒါဟာ လဲ အေးချမ်းစွာ နဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာပါဘဲ။
တကယ် တော့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ ရာထူး နေရာ ရ အောင်တိုက်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူ တွေလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
“ လွတ်လပ်ရေး ဆိုရာ၌ နေထိုင်ရေး လွတ်လပ်မှု၊ လူတစ်ဦး တစ်ယောက် အနေနှင့်လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးလုံး အနေနှင့် လည်းကောင်း၊ တိုးတက်ကြီးပွါးအောင် စီမံဆောင်ရွက် နိုင်အောင် လွတ်လပ်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စိတ္တ အဆင့်အတန်း တိုးမြင့်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လွတ်လပ်မှု၊ စသည်တို့ ကို ဆိုလိုပေသည်။
ဤလွတ်လပ်မှု ရယူလိုမှု သည်ပင်လျှင် နိုင်ငံရေး ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရကား နိုင်ငံရေးသည် လူမှုလူရေး မျှသာဖြစ်သည်။”
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူ/သား တွေကို တိုးတက်ကြီးပွါးအောင် လုပ်ရမှာ က တော့ အစိုးရလို့ အမည်ခံထားသူ မည်သူမဆို ရဲ့ အဓိကတာဝန်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို စစ်အစိုးရ က ပြည်သူ့အတွက် လုပ်ပေးရမှာတွေ ကို အရှက်၊ အကြောက် တရား ကင်းမဲ့စွာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကိုယ့်အိတ်ထဲ ကိုယ်ထည့်နေလို့ ခလေးသူငယ် နဲ့ အိုမင်းသူ တွေ အပါအဝင် ပြည်သူ/သား တွေမှာ လူရောင်မပြောင် ဘဲရှိနေရတာပါ။
“စာသင်ဖို့ အခွင့်မရလို့ စာသင်ခန်း အပြင်ပြူတင်းပေါက် က စာခိုးနားထောင် ပြီး စာလိုက်ဆို တဲ့ ခလေး ဟာ သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ အရမ်းလေးတဲ့ ထင်းစည်းကြီး နဲ့”
ဒါတောင် သိပ်ဇာတ်မနာ တဲ့ တကဲ့ အဖြစ်အပျက် ပါ။
အဲဒီ လို ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ တကဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ ကို အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဆိုတဲ့ လူကြီးများ မသိဘူး လို့ဆိုချင်တာလား။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာဖို့သာ လား။
အမှန် က တိုင်းပြည် ရဲ့ ဘဏ္ဏာရေး ဟာမဆင်းရဲပါဘူး။ ဒီခလေးငယ် တွေ အတွက် ပညာရေး ၊ ကျမ်းမာ ရေး ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဏာ ကသုံးရမှာပါ။
ဒါကို မနေနိုင်သူ တွေ အိတ်စိုက် ပေးနေလို့ သူတို့ နဲနဲ ဟန်နေနိုင်တာပါ။ တကယ်တော့ သူတို့ အခွင့်အရေး ကို သူတို့ မရရှာကြ ဖြစ်နေရတာပါ။
အမှန်တော့ ပြီးခဲ့တာတွေ ကို ပြည်သူ (အစစ်) တွေဖက်က သင်ပုန်းခြေ နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက် ပြီး ကိုယ်ကျိုးမကြည့် ဘဲ တိုင်းပြည် တကယ်ကောင်း အောင် လုပ်ဖို့သာ လိုပါမယ်။
အမှန်က ကျွန်မ ပြောချင် တဲ့ ကျွန်မ အတွေး က အခုမှ စပါမယ်။ ဒီအတွေး တွေဟာ NLD ပြန်မှတ်ပုံတင်သင့်/ မတင်သင့် ထဲက ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လွှတ်တော် လို့ အမည်တပ်ထား တဲ့ နေရာမှာ NLD ပါနိုင်ရင် တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါမှသာ လွှတ်တော် ဆိုသာ ပြောတိုင်းယုံတဲ့ ပုတ်သင်ညို တွေ အများစုချည်း စုဝေးရာ နေရာ မဟုတ်မှာ လို့ ကျွန်မထင်လို့ ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတော့ အဲဒီ လွှတ်တော် ထဲက တစ်ယောက်မဖြစ်စေချင် ပါဘူး။ သူဟာ ကျွန်မတို့ အတွက် အများကြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသူပါ။
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြည်သူတွေ ကြားမှာ၊ ပြည်သူတွေ ကို အမြဲ လက်တွေ့ ဝင်ကြည့် နေတဲ့ သူ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
(၂) ပါတီ တစ်ဖွဲ့ ထဲ ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ဘောင်ကျဉ်း မနေစေချင်ပါဘူး။
(၃) မြန်မာနိုင်ငံ က လွှတ်တော် အမတ် ဟာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဆို တဲ့ သမ္မတမှ မဖြစ်နိုင်တာ။
(၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သမ္မတ ပေးမယ် ဆိုတာက တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
(၅) အဓိက အရေးကြီးဆုံး ကတော့ အခုလို အမှောင်ထဲက ထွက် စ မမြင်နိုင်သေးတဲ့ နေရာ ကို စမ်းသွားနေတဲ့ နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အားလုံး ကို မြင်သာ တဲ့ နေရာ မှာရှိ ကို ရှိနေရ ပါမယ်။ ဒါမှ သာ တစ်ခုခု လွဲချော်ခဲ့ ရင် ပြန်ပြင်နိုင်မဲ့ လမ်းကြောင်း ကို အမြန် သိနိုင်ဖို့ပါ။
(We all wish for change, but there is no guarantee that change will take place or that it will live up to expectations. There is always an element of risk when we step out into the unknown.
(၆) အဲဒီ လွှတ်တော် ဟာလဲ သူ့ အထက်မှာ လွှမ်းမိုးသူ ရှိနေတဲ့ တကဲ့ အဖြစ်ကလေး လုပ်ထား တာလို့ မစွပ်စွဲချင်ပေမဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည် အားထားစရာ အဖွဲ့ လို့ လဲ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
ဒါတွေ အားလုံး ကို ကြည့်ပြီး လွှတ်တော် ထဲမှာ ထိုင်နေရင် အပြင်မှာ လက်တွေ့ဖြစ် နေတာတွေ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိ၊ အမြင် နဲ့ သိနိုင်၊ မြင်နိုင် မှု အားနည်း မှာ ကျွန်မ စိုးရိမ်မိ လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ ရဲ့ အမြင် ဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဝင်မပြိုင်စေချင်ပါဘူး။
အပြင် ကနေပြီး ပြည်သူလူထု ပါတီ အားလုံး ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် နဲ့သာ နေစေ ချင်ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာလဲ ကောင်းမကောင်း ဘယ်သူမှ သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို IQ ရော EQ ပါ မြင့်တဲ့၊ နား မျက်စိ ကို အမြဲဖွင့် ထားတဲ့၊ ပြည်သူ အပေါ် စေတနာ စစ်မှန်တဲ့ သူ အတွက် လမ်းရွေး မမှားနိုင်ပါဘူး။
မှားခဲ့ရင် ကော။ အခုလက် ရှိ အခြေအနေ ထက်တော့ ဆိုးစရာ မရှိပါဘူး။
အမှား ကို ပြန်ပြင် နိုင်တဲ့ ပညာ နဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိတဲ့ သူအတွက် ကျွန်မတို့ ပံ့ပိုး ဖို့ အဆင်သင့်ပါဘဲ။
အဓိက အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ သူ့ကိုယ်ကျိုး မပါဘဲ ပြည်သူလူထု အတွက် အလုပ်လုပ် နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်မတို့ အားလုံး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြ ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ကျွန်မတို့ လူထုအပေါ် ထားတဲ့ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာတရား နဲ့ မို့ အားလုံးဟာ အောင်မြင် ပါ။ ကိုယ့်အတွက် လဲ သတိကို တော့ မပြတ်ထားစေ ချင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ စေတနာ အတိုင်း မြန်မာပြည် ကြီး တိုးတက်ကြွယ်ဝ ကာ ပြည်သူပြည်သားများ ဆင်းရဲတွင်းမှ မကြာမှီ လွတ်ပါစေ။
ဒေါ်ခင်လတ်ရေ .. ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့ သဘောရှိလို့ မန့်လိုက်တာ အနီ ၃ ကဒ်ထိသွားတယ်။ :grin:
ကြားဖြတ်မှာ မ၀င် စေချင်သေးပါဘူး။ အပြင် ကနေ ဒါထက်မက လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို မျှော်လင့်လို့ပါ။
အဲဒီ လူ နဲ့ မူ ကိစ္စ မှာ – ကျွန်မ အမြဲ လက်ကိုင် ထား ငြင်းလေ့ ရှိတာက
“မူကောင်း” ရဖို့ “လူကောင်း” က အရင်လာရပါမယ်။
“လူကောင်း” ကမှ စိတ်ဓာတ် ကောင်းကောင်း နဲ့ အများအကျိုး ကို
ဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ “မူကောင်း” ကို ချမှတ်မှာပါ။
အဲဒီ မူကောင်း နဲ့ နောက်ပိုင်း လူတွေ ကို ပြန်ထိန်း ရမှာပါ။
သေချာတာပေါ့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူ/သား တွေ ကလဲ “လူကောင်း” ရဲ့ “မူကောင်း” ကို မလိုက်နာရင် ဖြစ်လာမဲ့ “ဥပဒေကောင်း” ရဲ့ “အပြစ်” ပေးမှုကို သိထားကြရပါမယ်။
ဒါမှ အားလုံး ဟန်ချက်ညီမှာပါ။
(ကိုhtoosan Post မှာ Comment Off မို့ ဒီက နေ Comment ပေးလိုက်တာပါ
I hope you don’t mind :-))
ကျေးဇူးပါ ဒေါ်ခင်လတ် ခင်ဗျား။ ဘယ်လိုကြောင့် comment off ဖြစ်သွားလည်း ကျွန်တော်မသိပါ။
သူကြီးရေ ကူပါဦး ။ screen option မှာလည်း comment ကို Mark လုပ်ထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်ခင်လတ်ခင်ဗျာ…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေရာရချင်လို့ဝင်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး…သူကိုယ်တိုင် လွတ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမူတွေကို ဒီထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်…သူ့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းမပါပဲ သူတစ်ယောက်ထဲ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုမိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ အခြေခံသဘောထားတွေက အားလုံးတူညီပြီးသားပါ၊အဓိက စည်းလုံးမူနဲ့ လက်တွဲညီဖို့ပါပဲ။သူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေ သူ့ကိုဘယ်လောက်အားကိုးတယ်၊ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မယ့် အချိန်ကောင်းပါပဲ….
လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်မှ… သိခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့.. နိုင်ငံတော်အဆင့်. အချက်အလက်တွေရှိပါတယ်..။
လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတာ.. ဥပဒေပြုသူတွေပါ..။ လူထုကရွေးကောက်ထားသူတွေပါ..။
.. ရွေးကောက်တင်မြောက်တာမပါရင်.. အာဏာရှင်ဖြစ်မဲ့လမ်းရောက်သွားမှာပေါ့..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဲဒီအဆင့်တွေ ဖြတ်ချင်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ် ထင်ပါကြောင်း..။
သိပါတယ်၊ သိလို့လည်း ကျောင်းဥပတိရုပ်ကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကို မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ပညာရေးမှူးနဲ့ ဌာန ဆိုင်ရာတွေကို အတင်းလုပ်ခိုင်းနေတာ၊
ဒါပေမဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လေနဲ့၊ လက်မပါဘူး၊ အောက်ကလူတွေ လည်းလုပ်နေကြပါတယ်၊
အမှန်ကတော့လူကြီးတွေကမသိတာမဟုတ်ပါ သိပြီး (1) ဘာကစလုဎ်ရမှန်းမသိ (2) ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်မနိုင်တာတခြားလူသိမှာကးလဲဆိုး
(3)လက်ပြောင်းလက်လွဲဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းလွှဲချလို့ရတဲ့(အထက်ကအမိန့်)(4) နောက်ဆုံးတော့ မသိဘူးကွာဆိုပြီ:ကိုယ်လွတ်ရုန်း
သြဇာကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ခံစားရတဲ့ နိုင်ငံရေးဂယက်တွေ ဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲသာ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ရပ် မှားသလား မှန်သလားဆိုတာ သမိုင်းက အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။………..လို့ ခင်ရတနာ Facebook မှာတွေ့ပါသည်။(^^)
ဦးစောကပြောဘူးတယ် မှားတယ်။မှန်တယ်ဆိုတာ လုပ်ပြီးမှသိရတာပါ။
but the God……
လူပြော မသန် လူသန် မပြော ဆိုတာလိုများလားမသိဘူး။
သူကြီး Kai ရဲ့ ထင်မြင်ချက် က လက်တွေ့ကျပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ တွေးမိတဲ့ ပြဿနာ က တစ်ခြားတိုးတက်ပြီးသော နိုင်ငံများနဲ့ မတူတဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ် လွှတ်တော် ပုံစံကိုပါ။
ဥပမာ – ဘော်လုံးပွဲမှာ ကစားနေတဲ့ အသင်းသား တွေ မှာ ဒိုင်လူကြီး ကို ပြန်ငြင်းခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒိုင် တွေရဲ့ဆုံးဖြတ် ကဘဲ အဓိကပါ။
လွှတ်တော် ထဲက လူတွေ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို Overwrite လုပ်နိုင်တဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ရှိပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေရာကို အစိုးရ အဖွဲ့ နဲ့ Level တူ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိနိုင်တဲ့ နေရာမှာသာ ရပ်စေလိုတာပါ။ ကျွန်မ သိပ်စိတ်ကူးယဉ် နေမိလားတော့ မသိပါ။ :-)
ဦးသစ်မင်း – ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ “နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက်၌” ခေါင်းစဉ် ကိုယူသုံး ရရင် သေခြင်းရဲ့ နောက်မှာ ဘာသာပေါ်လိုက်ပြီး
ဥပမာ – ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ
နောက်ဘဝ ကောင်းခြင်း/ မကောင်းခြင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ ကိုရောက်ခြင်း/ မရောက်ခြင်း စသဖြင့် ကွဲပါတယ်။ (Note – ကျွန်မ အနေနဲ့ ကတော့ မမြင်နိုင်တဲ့၊ မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေမှာ ဝိဝါဒ ကွဲ မနေဘဲ ဘုံတူနေတဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မေတ္တာထားခြင်း၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း၊ အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တာ တွေ ရှောင်ရှားခြင်း ဖြင့် ဘယ်သူမဆို နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက် ကို ကောင်းစွာ ကူးနိုင်ဖို့စိတ်ဖြစ်ပါမယ်။)
လောလောဆယ် တိုင်းပြည်ကံကြမ္မာ ကတော့ “နံရံ ၏ အခြားတစ်ဖက်၌” ပါဘဲ။
ဒီတော့ လက်ရှိ အများအကျိုး ကို စေသနာသန့်သန့် နဲ့ လုပ်ခဲ့သူများ ရဲ့ သမိုင်းကတော့ အရုပ်မဆိုး သင့်ပါဘူး မဟုတ်လား။
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အဖက်ဖက် က အဆင်းဘီးတွန်း မဲ့ သူတွေ ရံနေတာပါဘဲ။ ဝှက်ဖဲကိုင်ထားသူတွေ လဲ အပြည့်နဲ့။
တနည်းတော့ လဲရှိပါတယ်။ အဲဒီ အဆင်းဘီးတွန်း မဲ့ သူတွေ ဝှက်ဖဲကိုင်ထားသူတွေ လဲ သမိုင်းကြောင်းမှာ ပါမှာပါဘဲ။ ကိုယ့်နာမည် ကို ဘယ်လိုတပ်စေချင်လဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ့်အပြုအမူ ပေါ်တည်ပါမယ်။
ဒီတော့ မအောင်မြင်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မှားလို့ ဆိုပြီးတော့ မပုံသင့်ပါဘူး။
အဲဒီ လူတွေမှာရော၊ ကျွန်မတို့ အားလုံး မှာပါ တာဝန်ရှိတာဘဲ မဟုတ်လား။ :-)
ကျွန်မ ထင်တာတော့ – တကယ်လို့ ဦးစော သာ ကြိုးစင်မတက် ရဘဲ နေရာကောင်း တစ်ခုချီးမြှင့် ခံခဲ့ ရရင် “သမိုင်းမှာ အမဲစက် ထင်ပါစေ” သူ့လုပ်ခဲ့တာကို သူမှား တယ် ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို သာ သူ့အသက်ကို ပြန်ပေးရခဲ့မယ် ဆိုရင် သူဒီလိုလုပ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မ သာမာန် ဝေဖန်တာပါ။ သူ့ကို စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရာထူး ဂုဏ်၊ ပိုက်ဆံ၊ နာမည် ကျော်ကြားမှု … စတာတွေ ရှေ့တန်းထားမိလာရင် လူအများ ဟာ အသိမှန် ပျောက်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့လူ တွေဟာ အကျိုးကြောင့် ဖြစ်လာမဲ့ အကြောင်း တွေ ကို သိပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ရင် နာမည်ပျက် မှာကို သိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ နေရာကောင်း (သို့) ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု က အဲဒီ နာမည်ပျက် ကို ဖုံးသွားနိုင်မယ် ထင်ကြလို့ သူတို့ရဲ့ အတ္တ က ရှေ့ရောက်ခဲ့ ကြတာနေမှာပါ။
လောကကြီးမှာ တစ်ခါတစ်ခါတော့လဲ မျက်နှာဖုံးနဲ့ လူတွေမှန်းသိလဲ လူရာဝင် နေကြတာဘဲ မဟုတ်လား။
အဲလို လူတွေ အပြစ်လား၊ အဲဒါကို သိသိကြီးနဲ့ လက်ခံနေတဲ့ ကျွန်မတို့ လူအများ အပြစ်လား။ တစ်နေရာမှာတော့ တစ်ခုခု လွဲနေတာ အမှန်ဘဲ။ :-)
အမေ့ကို ကျနော် ယုံကြယ်တယ်… ။
ကျနော်တို့(ပြည်သူတွေ)ကိုလည်း… အမေယုံကြည်လို့ရဖို့လိုတယ်… ။
အမေ …ကျနော်တို့ကို ယုံအောင်… ကျနော်တို့…လမ်းတွေအများကြီး လိုက်လျှောက်ပြရမယ်။
အမေ့နဲ့..အနီးဆုံးမှာ… ရှိနေပြီး.. အမေနဲ့… ယုံကြည်မှုကို အပြန်အလှန်တည်ဆောက်ရမယ်.. ။
အမေရောက်ချင်တဲ့…ပန်းတိုင်ကို… အမြန်ဆုံးနည်း..အသေချာဆုံးနည်း…ပျက်မကျနိုင်တဲ့ နည်းနဲ့…
ထင်မြင်ချက်မပေးတော့ပါ… ၀င်ဖတ်သွားတာကိုပဲ တို့ ခဲ့ပါတယ်…
ပြန်တူး ပေးထားတာ ကျေးဇူးပါ ဆက်ဆက် နဲ့ နင်းနင်း တို့ရေ။
ဒီ Post က ဒုတိယမြောက် ရင်ဖွင့်သံ ပေါ့။
ဒီ အတွက် သူကြီး ကို အမြဲ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
စိတ်ထဲ မှာ ပေါက်ခွဲ ထုတ်ပစ်ချင်တဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ချပစ်ဖို့ နေရာလေး ပေးထားလို့ ။
မကျွမ်းကျင်သေး တဲ့ အချိန်မို့ Copy/Paste ဖြစ်နေခဲ့တာလဲ အခု မှ တွေ့တယ်။
အခု ကိုဇော်မင်း မှတ်ချက် ကို အစိမ်းချယ်ထားပါတယ်။
အခုအချိန်ဟာ နိုင်ငံ ရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် အရမ်းအရေးကြီး တဲ့ အချိန် လို့ မြင်မိ တွေးမိကြရင်
နင်းပြား ပြည်သူ တွေ အတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး မွေးပြီး
အားလုံး စည်းလုံး ဖို့
ရိုးသား တဲ့ စိတ် ရှိကြဖို့
ခေါင်းဆောင် ကို စိတ်စေတနာမှန် နဲ့ ပံ့ပိုးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်ခင်လတ်ခင်ဗျာ…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေရာရချင်လို့ဝင်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး…
သူကိုယ်တိုင် လွတ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမူတွေကို ဒီထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်…
သူ့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းမပါပဲ သူတစ်ယောက်ထဲ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုမိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ အခြေခံသဘောထားတွေက အားလုံးတူညီပြီးသားပါ၊
အဓိက စည်းလုံးမူနဲ့ လက်တွဲညီဖို့ပါပဲ။
ဒီလိုခေတ်ကြီးနဲ့.. အခင်းအကျင်းမှာ.. တချို့နိုင်ငံရေးတွေက.. ဥာဏ်သိပ်မမှီ…။
နိုင်ငံတခုဆိုတာက.. တယောက်ထဲလည်း.. သီးသန့်ခွဲနေမရတော့…
ကမ္ဘထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေ.. လာတွေ့နေ.. တွေ့ဆုံနေကြရတာပဲမဟုတ်လား..။
သူ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့.. နောက်ကိုသာ… မြန်မာလူထု.. ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြစေလို…။